Iyo ramangwana reMacOS rinogona kubva mukugona kumhanyisa iOS zvinoshandiswa | Ndinobva mac
Isu tinopedzisa nhasi nechidimbu chenhau chatataura nezvacho kanopfuura kamwechete uye ndizvozvo, pane dzimwe nguva, runyerekupe rwakakura pane netiweki yaiti Apple iri kuunza hurongwa padyo macOS kuIOS uye zvinopesana kuitira kuti mune ramangwana masisitimu maviri aite imwechete uye kuti zvigova zvishandiso zvinoita kuti titore danho pakati peimwe neicho kwete hurongwa hwavanomhanya.
Tim Cook nevamwe vake havana kuzeza kutaura nguva yadarika kuti zvaive zvisiri muhurongwa hwaApple kuti izvi zviitike asi zvinoita sekunge makuhwa aya ave kutanga kutenderera zvakare.
Tinofanira kurangarira kuti neshanduro yekupedzisira huru yemacOS High Sierra 10.13 system yakauya nyowani faira system kubva kuApple, iyo APFS. Iyo faira system inounza kuwanda kwakawanda uye izvo zvinoita kuti mashandiro eApple makomputa ave nani. Chinhu chakafanana chakaitika nekusvika kweIOS 11, apo. Iye zvino inosvetukira kune vezvenhau kuti, chokwadi, Apple inogona kunge ichironga izvo Mune inotevera hombe vhezheni yeMacOS, zvishandiso zvePadad zvinogona kumhanya, kuitira kuti iyo catalog yezvishandiso zviripo zveMacs ikure zvakanyanya.
Nekudaro, izvi zvinoita kuti tifunge nezvezvimwe zvinhu uye izvo ndezvekuti maMac haana zvivakwa zvekubata kunze kweTrackPad kana iyo Bata Bata, saka zvirokwazvo, kana runyerekupe urwu chiri rwechokwadi, Apple inogona kunge iri kugadzirira kusangana kunogona kweiyo masisitimu emafaira kubva mapuratifomu ese ari maviri. Parizvino, chinhu chega chatinogona kuita kumirira vhezheni idzva dzese iOS ne iOS 12 kana macOS 10.14. Izvo zviri pachena ndezvekuti chimwe chinhu chiri kuitika muApple maererano nesoftware nekuti zvinoita sekunge masosi asati aumbwa anovimbisa kuti mavhezheni matsva egore rino masisitimu haazosiyana maererano nemabasa matsva kuenderera mberi nekutarisa kugadzikana uye kugadzirisa mashandiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Iyo ramangwana reMacOS rinogona kubva mukugona kumhanyisa iOS zvinoshandiswa
Apple inotanga kutumira iMac Pro ine 18 cores